BullyingCanada – manome hoavy mamiratra ny ankizy ampijaliana
Tongava mpilatsaka an-tsitrapo
Fanomezana sy antoka lehibe
Mamela lova tsy hay hadinoina
manome ankizy ampijaliana
ho avy mamiratra kokoa
Tambajotra fanohanana 24/7/365
dia mijoro hanampy
Get Help Mangataha fanampiana izao
Support BullyingCanada Mandraisa anjara Afaka manampy ianao BullyingCanada miantehitra amin'ny malala-tanana
fanohanan'ny tsirairay toa anao.
vahaolana iray amin'ny karazana fampijaliana
Eto izahay hanohana anao amin'ny dingana rehetra.
BullyingCanada no hany fikambanana nasionaly mamaha ny toe-javatra mampijaly ny tanora Kanadiana amin'ny alalan'ny fanamorana mivantana ny fifandraisana eo amin'ny ankizy ampijaliana, ny mpampijaly azy, ny ray aman-dreny, ny mpampianatra, ny biraon'ny sekoly, ny sampan-draharaha sosialy, ary, raha ilaina, ny polisy.
Mangataha fanampiana izao
Avia ho namanay. Vonjeo ny Aina.
Ny fanohanan'ny mpilatsaka an-tsitrapo sy ny mpamatsy vola toa anao ihany no ahafahan'ny fanohanana tena ilainay.
Tanora an'aliny manerana ny firenena no miantehitra BullyingCanada mba hanampiana azy ireo hahazo fiarovana amin'ny mpampijaly saika isaky ny vondrom-piarahamonina.
Tambajotra fanohanana nasionaly 24/7 ho an'ny tanora ampijaliana.
Mamorona saina misokatra sy miaro ny ankizy ny atrikasa fiaraha-monina.
Ny vatsim-pianarana dia manome hery ny tanora ho lasa mpitarika ny fiarahamonina.
Feo ho an'ny niharam-boina
Miaro tsy an-kijanona ireo niharan'ny fampijaliana tanora.
Manome vola izao
Isaky ny fotoana rehetra
ampio izahay hamaly ny antso vonjy
miantso vonjy amin'ny 2020 amin'ny alalan'ny telefaona sy SMS
miantso vonjy amin'ny 2020 amin'ny alàlan'ny chat mivantana sy mailaka
mpitsidika ny BullyingCanada.ca amin'ny 2020
Isan'andro dia mahazo antso avo arivo mahery izahay. Ny fanampiana malala-tananao dia tena ilaina mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny tanora ampijalian'ny firenentsika.
Rob Benn-Frenette, ONB , Mpanorina Co
Tsy misy ankizy tokony hoterena hiala amin'ny fianarana satria tsy azo antoka ho azy izany—izany no iray amin'ireo antony maro nanangananay. BullyingCanada.
Katie Thompson (Neu) , Mpanorina Co
Omeo hoavy mamiratra ny ankizy ampijaliana.
Join BullyingCanada amin'ny fanomezana loharano tena ilaina sy mamonjy aina ary fanampiana ho an'ireo tanora marefo indrindra eto amin'ny firenena. Maro ny safidy hidirana — manomboka amin'ny maha-iray amin'ireo mpamatsy vola malala-tananay ka hatramin'ny fanolorana an-tsitrapo ho an'ny zotra fanohanana na fanampiana ny birao aoriana. Mifandraisa aminay anio raha te hahalala bebe kokoa.
Aoka ho Fiainana
Miara-miasa isika rehetra — tanora an'arivony no miankina aminay.
Mba manomeza izao, fa ny fotoana rehetra dia misy dikany!
Arakaraky ny maha-ela ny zaza iray no iharan'ny herisetra ara-batana, ara-pihetseham-po ary ara-tsaina izay mety haharitra mandritra ny androm-piainany. Ny fampijaliana dia mety manimba ny fahatokisan-tena, mahatonga ny ankizy hisintona sy tsy hatoky tena, miaraka amin'ny aretim-bavony, ny fanafihan'ny tebiteby, ary ny nofy ratsy. Tsy afaka mifantoka any an-tsekoly izy ireo, ka miteraka naoty ratsy kokoa izay mety hampihena ny fahafahany ho avy. Rehefa tsy mitsahatra ny fampijaliana, dia mety hitarika ny ankizy hanala ny ainy ny fahaketrahana sy ny adin-tsaina.
Mila herim-po lehibe ny ankizy mba hanatona antsika mba hahazoana fanampiana. Ny fanomezam-pahasoavanao dia hiantoka fa hovaliana ny antso vonjy rehetra, amin'ny andro rehetra… amin'ny fotoana rehetra. Ny fanomezanao dia manampy anay hifikitra amin'ny ankizy fa raha mbola mila atsahatra ny fampijaliana sy hanome azy ireo ho avy mamiratra!
Inona no mamaritra tsara ny fanontanianao? (*)Mbola tanora aho ary mila fanampiana amin'ny fiatrehana ny fampijaliana.Mila fanampiana amin'ny fanomezana na rosia hetra aho.Te hiresaka amin'olona aho momba ny fanomezana lova na ny fandrindrana trano.Te-hirotsaka an-tsitrapo aho BullyingCanada.Manana fanontaniana na fanehoan-kevitra ankapobeny aho.Mpikambana amin'ny haino aman-jery aho ary te hifandray.Tsy te ho ao amin'ny lisitry ny mailakao intsony aho.
Mangataha fanampiana izao—Tsy irery ianao
Fanohanana 24/7/365 amin'ny alàlan'ny telefaona, lahatsoratra, chat, na mailaka
Enjehina ve ianao?
Afaka miantehitra amin'ny fanohananao ve izahay?
Tohizo hatrany ny vaovao BullyingCanada
politika fiarovana fiainan'olona | Fepetra fampiasana | Kit Media & Torolàlana momba ny marika
© Copyright 2006-2022. BullyingCanada, Inc. Zo rehetra voatokana. | Laharana fisoratana anarana fiantrana: 82991 7897 RR0001.
Fampandrenesana manan-danja momba ny fihanaky ny valan'aretina COVID-19
Noho ny olana ara-pahasalamana maneran-tany ankehitriny sy ny loharanon-karena voafetra, BullyingCanada dia hiasa amin'ny fahafaha-manao ambany kokoa miaraka amin'ny serivisy ilaina ihany. Midika izany fa ny tolotray (mailaka, chat mivantana, fanohanana an-tsoratra, ary telefaonina) dia tsy ho azon'ny tanora mivantana mandritra ny faharetan'ny valan'aretina. Ny olona hafa rehetra dia hapetraka amin'ny filaharana amin'ny fanaraha-maso amin'ny fotoana manaraka.
Misaotra anao amin'ny fahatakaranao.
Ampitomboy ny lahatsoratra
Mihena ny lahatsoratra
Rohy misy rohy
Famakiana azo vakiana